100% စစ်မှန်သော JUSTFOG 1500mah စတော့ရှယ်ယာ Svapor လက်ကားအတွက်တဦးတည်း Fog 1 Starter Kit ထိပ်တန်းဖြည့်စနစ်အားလုံး - တရုတ် DongGuang BEC နည်းပညာ
အားလုံးစတော့ရှယ်ယာ Svapor လက်ကားအတွက်တဦးတည်း Fog 1 Starter Kit ထိပ်တန်းဖြည့်စနစ် 100% စစ်မှန်သော JUSTFOG 1500mah
Exchange Tank Tube
အထူးဒီဇိုင်း Anti-တံစို့ coil
JUSTFOG FOG1 Kit တစ် 1500mAh ဘက်ထရီနှင့် 2ml စွမ်းရည်နှင့်တကွကြွလာ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ childproof အဖွင့်စနစ်နှင့်ဆန့်ကျင်တံစို့ကာကွယ်မှုဒိုင်းလွှားနှင့်အတူလုံခြုံရေးယုဂျဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းအဆာ, အစားထိုးအကြံပေးအဖွဲ့ပြွန်နှင့်သတ္တု-coated အသွင်အပြင် featuring, ဒီကိရိယာအစုံသင်တို့အဘို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာင်နှင့်စစ်ပြန်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိရိယာအစုံပါပဲ။ သင်တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ် Chaser သို့မဟုတ်အရသာ Chaser ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ဒီကိရိယာအစုံအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မှတ်ချက်: Not available to South Korea,France, Netherlands and Belgium.
Justfog FOG1 Kit ရောင်းအားပွိုင့်
3. Childproof ဖွင့်လှစ်မှုစနစ်
4. 100% ဂျပန်အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းကွိုင်
5. စမတ်ဘက်ထရီကာကွယ်မှု function ကို
အမည် Justfog FOG1 Kit
ကွိုင် Resistance 0.5Ω / 0.8Ω
tank စွမ်းဆောင်ရည် 2ml
SDimensions 20mm (W) က x 113.5mm (H)
ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း သံမဏိ, Bayer ဂျာမဏီကနေ PC ကိုပြွန်
အမျိုးအစားအားသွင်း micro5PIN နံပါတ်ကို USB Cable ကို
အရောင်များ အနက်ရောင်, Silver,
Justfog FOG1 Kit Pack များစာရင်း
1 x ကို Clearomizer
1 x ကိုဘက်ထရီ
1 x ကိုကွိုင် Cylinder (0.5Ω)
1 x ကိုကွိုင် Cylinder (0.8Ω)
2 x ကိုအတွင်းပိုင်းအို-လက်စွပ် (အနက်ရောင်)
3 x ကိုအတွင်းပိုင်းအို-လက်စွပ် (အဖြူ)
ဦး 1 x အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်
ယခင်: 2017 နောက်ဆုံးပေါ် Childproof ဖွင့်ပွဲစနစ် E-cig Kit 100% အီးယူ TPD ကိုက်ညီ vapoizer 900mah J-လွယ်ကူသော Justfog P16A starter kit စက်ရုံစျေးနှုန်းလက်ကား
နောက်တစ်ခု: လက်ကား Justfog အီးစီးကရက်စစ်မှန်သော Justfog Q16 Clearomizer / Atom / Tank
2017 က New Arrival 900mAh ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် JUSTFO ...